Liverpool oo badisey & Arsenal oo soo sooco la yiri ama iska seexo – SBC
Liverpool oo badisey & Arsenal oo soo sooco la yiri ama iska seexo
Liverpool ayaa ku badisey guushii ugu weyneyd ee ay ka gaarto horyaalka Ingiriiska ka dib markii ay maanta 5 gool & waxba ay daristey kooxda ka dhisan caasimada labaad ee England ee lagu magacaabo Birmingham City.
Maxi Rodriguez ayaa 3 gool u dhaliyay oo Hat trick ah u saxiisay Liverpool taasi oo ka dhigaysa rajada Liverpool mid aad u soo kacaysa ayna rajo ka qabto inay soo cariirsato afarta ugu horeysa si ay boos uga xirato Man City & Tottenham ka qayb galka Champion League. Labada gool ee kale waxaa Liverpool u saxiixay Joe Cole & Dirk Kuyt, waxaana haatan Liverool ay kursiga dhigatey kaalinta lixaad iyadoo leh 52 waxaana ay ka hoosaysa 3 dhibcood oo qura kooxda Tottenham oo leh 55 dhibcood.
Dhinaca kale naadiga Arsenal oo ku adkeysanaya inaanay ka rajo ka dhigin koobka Premiership-ka ayaa beri ciyaar adag oo ku xiran mustaqbalkooda waxay leeyihiin kooxda Bolton.
Hadii Arsenal ku badiso goolal badan oo gaaraya 6 waxay kaalinta labaad ka qabsan kartaa Chelsea laakiin hadii ay fursadan iska qasaariso waxay marti u noqonaysaa iska jooga kaalinta sadexaad ee ay haatan ku jirto, waxaana taageerayaasha Arsenal beri iyagoo safar u ah Bolton ay sugayaan natiijada the Gunners ay ka keenaan Bolton oo kaalinta 8-aad fadhisa lehna 43 dhibcood.